health – enagrikkhabar
यौनसम्पर्क सम्बन्धी ७ अनौठा तथ्य जानी राखौं
७. एक प्रतिशतमात्र महिला स्तन र निप्पलमार्फत् उत्तेजित हुन्छन् ।एजेन्सीको सहयोगमा
श्रीमान्सँग शारीरिक रूपमा आफू सन्तुष्ट हुन सकिन:
अण्डा खाँदाका ८ फाइदाहरू
हामीले कहीँ कहीँ गर्मीमा अण्डा खानाले झन् गर्मी बढ्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएका छौँ। तर यो कुरा हामीले कति मात्रामा अण्डा खान्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। कुनैपनि खानेकुरा चाहिने भन्दा धेरै खानु राम्रो हुँदैन। त्यसैले धेरै होइन, शरिरको अवस्था र उमेर हेरेर दिनहुँ एक–दुईवटा अण्डा खानाले स्वास्थयमा लाभ पुग्दछ। यसले छाला र कपालको सुन्दरता बढाउनुका साथै शरिरलाई आवश्यक तत्वहरुको पनि पूर्ति गर्दछ।
१. शरिरमा शक्ति प्रदान गर्छः अण्डाको सेतो भागमा ३.६ ग्राम र पहेलो भागमा २.७ ग्राम गरी ६.३० ग्राम प्रोटिन र अरु पोषक तत्वहरु पाइन्छ। यसले गर्दा अण्डा खानाले शरिरमा दिनभरि शक्ति प्राप्त हुन्छ। यसमा शरिरलाई आवश्यक पर्ने एमिनो एसिड पनि रहेको हुन्छ। साथै अण्डाले कोषहरु बिग्रिनबाट रोक्छ र दिमागलाई पनि चालू राख्छ।
५. दिमागलाई स्वस्थ्य राख्छः अण्डामा पाइने कोलीन पोषण दिमागको विकासका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसले दिमागलाई चालू राख्छ र लामो समयसम्म सम्झने शक्तिमा पनि बृद्धि गर्छ। गर्भवती महिलाले अण्डाको सेवन गर्नाले गर्भमा रहेको बच्चाको विकासमा पनि सहायता पुर्याउँछ।
६. आँखाको ज्योतिमा सहयोगीः दिनहुँ अण्डा, पालुङ्गो र ब्रोकाउलीको सेवनले आँखा सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरुको समाधान गर्छ। अण्डमा भएको एन्टी–अक्सिडेन्ट, ल्यूटिन र जिजेन्थिन तत्वहरु आँखा स्वस्थ्य राख्न आवश्यक पर्ने तत्वहरु हुन्। मोतीबिन्दु, आँखा रातो हुने, सुख्खा हुने, पानी आउने जस्ता समस्याहरुका लागि अण्डा फाइदाजनक रहेको छ।
७. स्वस्थ्य कपाल र नङका लागिः अण्डामा भएको प्रोटिन, भिटामिन र अन्य पोषक तत्वहरुले कपाल र नङलाई बलियो बनाउन मद्धत पुर्याउँछ। अण्डामा एमिनो एसिड, सल्फर र जींक हुने भएकाले यसले शरिरका साथै छाला र कपाललाई समेत स्वस्थ्य बनाउँछ।
८. हड्डीहरु बलियो बनाउँछः अण्डा भिटामिन डी को प्रमुख श्रोत मानिन्छ। यसले क्याल्सियमलाई सोसेर हड्डीहरु बलियो बनाउँछ। दूध, दही जस्ता डेरी उत्पादनका साथमा अण्डाको पनि सेवन गर्नाले उमेर बढ्दै जाँदा आउने हड्डीका समस्याहरु हटाउन मद्धत गर्छ।
घरेलु बिधि अपनाएर एक महिलाले क्यान्सर निको पारेपछि डाक्टरहरु चकित परे
घरेलु बिधि अपनाएर एक महिलाले क्यान्सर निको पारेपछि डाक्टरहरु चकित परे ।
आफुलाई लागेको क्यान्सर रोग एक महिलाले फलफुल खाएरै निको पारेपछि डाक्टरहरु चकित परे । क्यानडिस मेर फोक्स नाम गरेकि महिला जम्मा ३१ वर्षको हुँदा उनले आफु थाइराइड क्यान्सरको चौथो स्टेजमा रहेको थाहा पाइन । डाक्टरहरुले उनको आयु पाँच वर्षमा सकिने ठोकुवा गरिदिए । डाक्टरले आफ्नो आयु पाँच वर्षभित्र सकिने किटाण गरिदिएता पनि फोक्स भने त्यस्तो खवरबाट दुखित भइनन् । उनले डाक्टरको अनुमानलाई चुनौति दिदै आफ्नोे आयुको किटाण गर्ने डाक्टरहरुलाई नै आश्चर्यमा पार्ने काम गरिन् । सन २०११ मा फोक्सले आफ्नो कोरल बोनको माथि एउटा मासुको थुप्रो अनावश्यक रुपमा झुण्डिएको पत्तो पाइन जसलाई डाक्टरहरुले थाइराइड क्यान्सर नामाकरण गरिदिए । उपचार प्रकिया सुरु गरेता पनि क्यान्सर रोग अरु अँगहरु तिर समेत फैलिन थाल्यो । आफ्ना दुईजना साथीहरु क्यान्सरका कारण मरेको अनुभव गरिसकेकि फोक्सले के अनुमान लागाइन भने उनका साथीहरु क्यान्सर रोगका कारण नभई उपचरका कारण मरेको ठम्याइन् । अन्तमा उनले आफूले केमियो थेरापी उपचार बिधि नअपनाउने निधो गरिन् ।
उनका डाक्टरहरुले केमियो थेरापी उपचार बिधि अपनाउन धेरै कर गरे तर फोक्स आफैले एउटा अध्ययन गरिन र केमियो थेरापी गरेर आफ्नो शरीरलाई दुख नदिने अडान देहोर्याइन् । केमियो थेरापीको सट्टामा बरु दिनको तीन वटा भूइकटहर खाने बिचार गरिन् । उनले जस्तै अंगुर, कागती, मेवा, स्याउ, केरा र किवि लगायतका अन्य फलफुलहरु पनि नियमित खान थालिन् । यी फलफुलहरु खानुका साथै उनले जनावरहरुबाट प्राप्त हुने प्रोटिन जन्य खाने कुराहरु खान पूर्णरुपले बन्द गरिन् । ६ महिना पछि, स्टेज ४ क्यान्सर पूर्णरुपले निको भयो । यो देखेर फोक्सका डाक्टरहरु चकित परे र उनीहरुले फोक्सलाई क्यान्सर मुक्त प्रमाणित गरिदिए । फोक्सले क्यान्सरलाई सहजै जितेको विषयमा विज्ञहरुले के पत्तोलाए भने फोक्सले दैनिक रुपमा खाएको फलफलुलहरुमा एक प्रकारको पोषण तत्व आबद्ध हुन्छ जसले क्यान्सरका तन्तुहरुलाई सहजै पराजित गर्न सक्छ ।
यसका साथै फोक्सले केमिकललाई आफ्नो जिवनबाट परै राख्नका निम्ति सौन्दर्यका सरदाम, घरसफागर्न प्रयोग गरिने उत्पादनहरु, धुम्रपान त्याग्नुको साथै आफूलाई तनाव दिन सक्ने विषयहरुबाट परै रहने बिचार गरिन् । उनको अनुभव अनुसार, तनाव, केमिकल र जनावर जन्य खाद्य पदार्थले क्यान्सरलाई मलजल तथा उर्जा दिन्छ । तसर्थ उनले त्यस्ता खाद्य पदार्थबाट आफू टाढैरहेको बताउछिन् । क्यान्सरलाई पराजित गर्न सक्नुको पछाडी आफुले अपनाएको पोषण जन्य खानपीनका कारण संभव भएको जिकिर फक्सको रहेको छ । उनको अनुसार डायटले नै क्यान्सरका तन्तुहरुलाई सखाप पारेको हो । उनले के पनि उल्लेख गरेकि छिन भने पोषण तत्व, दैनिक शारीरिक अभ्यास, सकारात्मक भावना र आध्यात्मिकताका कारण आफूले क्यान्सलाई पराजित गर्न सफल भएको बताउँछिन् । उनले अझै के पनि उल्लेख गरेकि छिन भने, भूईकटहर जस्ता फलफुलमा आवद्ध गुणले क्यान्सरलाई सहजै पराजित गर्न सक्छ ।